ပြောင်းဖူးသည်တန်ဖိုးရှိသောသီးနှံသီးနှံများဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးပြောင်းသုံးစွဲမှုသည်ပိုမိုများပြားသည် 116 ဆာဟာရသဲကန္တာရအာဖရိကမှာသန်းတန်ချိန်, 50% အာဖရိကတိုက်တစ်ခုလုံးအကုန်အကျခံ။ လူ ဦး ရေ၏ပြောင်းသည်စားသုံးမှုကိုဖြစ်စေသည် 30% ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြောင်းထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးအာဖရိက, သူမ၏ထုတ်လုပ်မှုအနည်းငယ်ကျော်ဖြစ်ပါတယ် 10 ပြောင်းပြောင်းတန်ချိန်သန်း, တောင်အာဖရိကအားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏. ပြောင်းဖူးသည်ပထဝီအနေအထားအရနိုင်ဂျီးရီးယားကို ဖြတ်၍ နိုင်ဂျီးရီးယားအများစုအတွက်သင့်တော်သည်. ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8,0 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တောင်အာဖရိကတွင်နှစ်စဉ်ပြောင်းတန်ချိန်သန်းသန်းခန့်ထုတ်လုပ်သည် 3,1 ဟက်တာသန်း (၁) သန်းထုတ်လုပ်မှု၏ထက်ဝက်သည်လူ့အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်ပြောင်းဖူးဖြူဖြစ်သည်.
အာဖရိက၏ပြောင်းဖူးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအရေးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုများမှာစိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာများမလုံလောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနိမ့်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက်. ၏ဒေတာအရသိရသည် 2014, ထက်နည်းရှိပါတယ် 10 အာဖရိကရှိစတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင်ပြောင်းပြောင်းခြွေလှေ့စက်ကိုထုတ်လုပ်သည်, နှိုင်းယှဉ်မှု 257 ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အစုံ, 200 ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်အစုံ, 130 အိန္ဒိယမှာအစုံ, နှင့် 125 ဘရာဇီးအတွက်စုံ. ထို့ကြောင့်, ပြောင်းဖူးထုတ်လုပ်မှုကိုတင်သွင်းမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အာဖရိကနိုင်ငံ၏စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်အတွက်အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်.
In 2014, နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဂျောနသန်သည်နိုင်ဂျီးရီးယားဗဟိုဘဏ်အားဖွဲ့စည်းရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည် 50 နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့စိုက်ပျိုးရေးစက်မှုထုတ်လုပ်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့ဘီလျံနာ naira စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖြစ်အမြန်ဆုံး. ဤရွေ့ကားပြောင်းရွှေ့တည်ထောင်များအတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်၏အကောင်အထည်ဖော်အရှိန်မြှင့်ဖို့ကတိကဝတ်ဖြစ်ပါတယ် 1,200 တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားတွင်စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရားများငှားရမ်းခြင်းနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယား၏“ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတော်လှန်ရေး။ ”
အာဖရိကစျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များအရ ,VICTOR FARM MACHINERY သည်အာဖရိကနိုင်ငံ၏ပြောင်းထုတ်လုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည့်ပြောင်းစက်ခြွေလှေ့စက်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ,နောက်တစ်ခုမှာပြောင်းဖူးအခွံနှင့်ခြွေလှေ့စက်ဖြစ်သည်.
ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက်ကိုဂျုံမှုန့်နှင့်သီးခြားခွဲထုတ်ရန်အသုံးပြုသည်. ပစ်ခတ်မှုမပြုမီ, အရွက်ကို manually ဖယ်ရှားသည်. ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက်ကိုလက်ဖြင့်လည်ပတ်သည်သို့မဟုတ်ပါဝါသုံးနိုင်သည်. ပြောင်းဖူးခွံစက်တွင်ဆလင်ဒါတစ်ခုပါ ၀ င်သည် , ခွက်ပရိသနှင့်မှုတ်တံယူနစ်. ပြောင်းဖူးကိုပြောင်းဆလင်များနှင့်ခွက်များကြားတွင်ကျွေးသည်. Blower သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ပစ္စည်းများနှင့်သန့်ရှင်းသောကောက်ပဲသီးနှံများကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်သည်. The 5-10 hp လျှပ်စစ်မော်တာသို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီစက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်. ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှု ၁ မှ ၂ တန်အထိရှိသောဤပြောင်းအမျိုးအစားခြွေလှေ့စက်ကိုအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးစျေးပေါနိုင်သည် ,ဒါဟာပြောင်းစိုက်တောင်သူများတွင်ရေပန်းစားပါတယ်.
ဒုတိယအမျိုးအစားမှာဘက်စုံသုံးခြွေလှေ့စက်ဖြစ်သည် ,ပြောင်းဖူးခွံခြွေလှေ့၏ပေါင်းစပ်,ပြောင်းဖူးအခွံနှင့်အတူပြောင်းနှင့်စပါးကိုကြိတ်သောအရာ. ၎င်းကိုတစ်ချိန်တည်းပြောင်းပြောင်းစက်များကြိတ်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်. အဆိုပါ spike သွားအမျိုးအစား sheller ၌တည်၏, ပိုကောင်းပစ်ခတ်မှုစွမ်းရည်များအတွက်တံစို့အမျိုးမျိုးကွဲပြားမှာတုန်လှုပ်နေကြသည်. Shelling ထိရောက်မှုအကြောင်းပါ 100% ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကျိုးအစေ့နှစ် ဦး စလုံးထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည် 2.0%. ပြောင်းဖူးသေးငယ်သောခြွေလှေ့စက်သည်သမားရိုးကျစနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုပ်အားများစွာချွေတာသည်.